डा.राजेन्द्र भद्रा - साप्ताहिक
डा.राजेन्द्र भद्राका लेखहरु
डा.राजेन्द्र भद्रा , चैत्र १०, २०७२
मेरी एउटी महिला साथी छिन् । उनलाई श्रीमान्बाट कहिल्यै सन्तुष्टि हुँदैन रे । समागम गरेको १ मिनेटमै उनका श्रीमान्को वीर्य झर्छ रे । उनलाई कहिल्लै यौनसन्तुष्टि भएन रे । मसँग सम्पर्क गरेपछि उनको चित्त बुझ्यो रे । उनी लामो समयसम्म यौनसम्पर्क गर्न रुचाउँछिन् । यो रोग हो की उनी बढी कामुक भएकी हुन् ?
डा.राजेन्द्र भद्रा , आश्विन २४, २०७२
म २६ वर्षीया महिला हुँ । मैले आफ्नो केटासाथीसँग यौनसम्पर्क राख्ने गरेकी छु तर उसले जहिले पनि मलाई पछाडि यौनसम्पर्क गर्छ अर्थात् गुदद्वारमा लिङ्ग राख्छ । मैले पनि त्यसो गर्न मानें तर अहिले मेरो गुदद्वार चिलाउन थालेको छ । यो कुरा म आफ्नो परिवारलाई भन्न सक्दिनँ । के तपाईं मलाई सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ ? ०१६८
डा.राजेन्द्र भद्रा , आश्विन १९, २०७२
म २६ वर्षीय युवक हुँ । मेरो समस्या के छ भने मेलै आफनै श्रीमतीसँग यौनसम्पर्क गर्दा छिटो वीर्य झर्छ, २-३ सेकेन्डमै । त्यसले गर्दा हामीले यौनसम्पर्कको मज्जा लिन पाइरहेका छैनौं । यो समस्या समाधानका लागि के गर्नुपर्ला ? कि कुनै औषधी खानुपर्छ ? ९२५६